कोरियामा एक नेपाली चेली यसरी बनिन प्र’हरी अधिकृत – Eps Sathi
August 3, 2021 701
काठमाडौँ – विवाह मामिलामा नेपालजस्तै छ कोरिया । नेपालजस्तै यस अर्थमा कि वि’वाह व्या’क्तिगत छ’नौटभन्दा सामाजिक उत्तरदा’यित्वको रूपमा मानिन्छ । वि’वाह गर्न पनि नेपालजस्तै शहरिया र धनाड्यलाई कोरियामा सहज छ । ग्रामीण कोरियालीलाई भने नेपाली ग्रामिण भेगका युवायुवतीजस्तो विवा’ह गर्न सहज छैन ।
धेरै कोरियाली युवतीले वि’वाह गर्नै छाडेका छन् । अझ ग्रामीण क्षेत्रका युवासँग वि’वाह गर्ने विषय त झनै परको कुरा भयो । यहि स’मस्यालाई चि’र्न कोरियाली सरकारले सन् १९९० को दशकमा विदेशीसँग विवाह गर्न पाउने कानून ल्यायो । का’नूनसँगै धेरै विदेशी युवतीहरू कोरियालीसँग विवाह गरेर गए । यसरी वि’वाह गरेर जानेहरूले धेरै दुः’ख पाएको, या’त’ना भो’गेको जस्ता समाचारहरू धेरै समय चले ।
पछिल्लो समयमा केहि सकरात्मक समाचार पनि आउन थालेका छन् । कोरियाली भाषा नै नजानी त्यहाँका नागरिकसँग बि’हे गरेर गएका आ’प्रवासी श्रीमतिहरूको जीवनमा समेत परि’वर्तन आएको छ । यस्तै परिवर्नत आउनेमा एक हुन् नेपालकी सम्झना राई । ११ वर्षअघि आफ्नै आन्टीले मिलाएको ब्ला’इन्ड डे’टपछि सम्झना कोरियालीसँग युवकसँग विवाह गर्न राजी भइन् । तीन दिनभित्र बिहेको टु’ङ्गो लाग्यो । त्यहि वर्ष उनी कोरिया गइन् ।
कोरिया गएको ११ वर्षपछि उनी अहिले कोरियाली प्र’ह’रीको अधिकृत छिन् । उनले आफ्नो नाम परिवर्तन गरी कोरियाली नाम किम हाना बनाइन् । यहि नाममा अंगी’कृत नागरिकता लिइन् । र‚ त्यहि आधारमा उनले अहिले अधिकारी हुने अवसर पाइन् । ३१ वर्षे सम्झना राई अर्थात् किम हानाले बीबीसीसँग कुरा गर्दै आफू वंशज कोरियालीजत्तिकै स’क्षम भएको नठा’ने पनि आफूलाई त्यसबारे सोच्ने समय नभएको बताएकी छन् ।
सम्झना राई अहिले परराष्ट्र मामिला अफिसमा कार्यरत छिन् । उनले नेपाली र कोरियाली समुदायको पूलको रूपमा काम गरेकी छन् ।
कोरियामा वि’वाह गरेर आउने एक तिहाइ भियतनामी भएकाले आफूलाई धेरैले भियतनामी सोचेको उनले बीबीसीसँग बताएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘म अझै सम्झन्छु‚ जब मेरो छोरो सानो थियो‚ त्यसबेला म बसमा चढ्न लागेको थिएँ । कुनै एक पुरुषले मलाई भियतनाम आइज‚ यतै बस भन्यो ।’
सन् २००८ मा कोरियाली सरकारले बहुसांस्कृतिक सहयोग केन्द्रहरू स्थापना गरेपछि धेरै सहयोग भएको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘यहाँ ठुलो विदेशी समुदाय छ र‚ मैले आफ्नो सेवा गर्दा भिन्न भिन्न प्रकृतिका मान्छेहरूलाई पनि भेटेको छु ।’ बीबीसीले सम्झना राई नेपालको कुन ठाउँबाट कोरिया गएकी हुन्‚ र उनका श्रीमान के गर्छन् जस्ता विषयमा भने उल्लेख गरेको छैन । तर, गृहिणीको रूपमा कोरिया प्रवेश गरेर कोरियाली प्र’हरी अधिकृत बन्नु र नेपाली अनि कोरियाली समुदायको पूल बन्नु सम्झनाका लागि ठूलो प’हिचान हो।
Prevनेपालीले पनि जितेका थिए ओलम्पिकमा स्वर्ण, पुर्याइएको थियो सगरमाथाको चुचुरोमा
Nextकोरियाको विदेशी मुद्रा संचितीले बनायो रेकर्ड, अहिलेसम्मकै उच्च
१५ लाखभन्दा बढिले भरे इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आईपिओ, कति कित्ता पाईने भयो त?
असाध्यै बोल्ड रुपमा प्रस्तुत हुने भेटेनरी डक्टर टिकटकमा भाइरल, को हुन त उनि? भिडियोसहित
आउने भयो न्यादी हाइड्रोपावरको आइपिओ, हेरौं कहिलेबाट खुल्दैछ?